Theresa May oo si kulul u cambaareysay madaxweyne Trump
Ra'isalwasaaraha Britain Theresa May ayaa cambaareysay hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu haweenka ka tirsan aqalka Koongreska Mareykanaka oo aan ahayn caddaan uu ku yiri 'Dib u laabto'. Raisalwasaraaha Britain ee xilka ka sii tageyso ayaa hadalka Mr Trump ku tilmaantay 'mid aan la qabali karin', sida ay sheegtay afhayeen u hadashay Mrs May. Madaxweyne Trump waxaa
Somalia Safarka Ra’iisul-wasaare Xasan Cali Kheyre ku tagay Gaalkacyo qaybta Maamul-Goboleedka Puntland ee Soomaaliya, waxay bedeshay ciyaartii (xurguftii) ka dhaxaysa maamul-goboleedka iyo dowladda dhexe, taas oo salka ku haysa hirgelinta hanaanka federaalaynta dalka. Sir ma ahayn in Madaxweyne Maxamed Cabdullahi – Farmaajo uu doonayo inuu dalka ka hirgeliyo hanaan federal ah,
Madaxweyne cusub oo loo magacaabey gobolka Amxaaradda
ADDIS ABABA, Ethiopia – Madaxweyne cusub ayaa loo magacaabey gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya kadib markii inqilaab fashilmay lagu khaarijiyey madaxii gobolkaasi, bishii hore. Temesgen Tiruneh,
Ambassador Abdirizak Diinaari oo soo bandhigay dhaliisha Xisbiga Kulmiye Iyo waxyaabahii uu doorashada ku galay ...
DHALIISHA RASMIGA EE XUKUMADDA KULMIYE EE U HOGAAMINAYO MADAXDAWEYNE MUUSE BIIXI IYO FULIN LA’AANTA BALAN-QAADYADDII KAAMBBEYNKA DOORASHADDA ————————————————————— • La dagalanka xoriyatul qowlka • Sixir-bararka • Cadaadiska Xadhiga siyaasi ah • Hoos u dhaca siyasadda arimaha dibadda • Hoos u dhaca iyo xayiradda Ganacsiga dibadeed ee muwadininta reer somaliland. • Khilaafka
Trump oo heshiis caalami ah ka baxay 'isga oo ku xumeeynaya Obama'
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka baxay heshiiska Niyukleerka ee iran isaga oo ku xumaynaya madaxwaynihii ka horreeyay ee Barack Obama, sida ku cad warqad sir ah oo la soo dusiyay oo uu qoray safiirkii hore ee UK u fadhiyay Washinton. Sir Kim Darroch ayaa ku tilmaamay go'aankii Tump ee uu heshiiska kaga baxay in uu ahaa "dhaawac diblamaasiyadeed ", sida uu maanta qoray wargayska
Cilmiga badda waxaa uu ka mid yahay culuumta ay aadka ugu yartahay barashadiisu bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna dumarka. Qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa u arka in Cilmiga badda uu yahay mid howshiisa ay ka soo bixi karaan oo kaliya ragga oo ay dumarka ku adagtahay. Balse Khadra Cabdi Axmed waa gabadh Soomaaliyeed oo baratay culuumta badda islamarkaana
Kulan looga hadlay ammaanka oo ka qabsoomay Boosaaso
BOOSAASO, Puntland - Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa qasriga Madaxtooyada Boosaaso kulan muhiim ah kula qaatay Guddiga Amniga magaalada Boosaaso. Kulanka Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland iyo Guddiga
Britain oo Trump ugu baaqday in uusan ka bixin heshiiska Iiraan
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ugu baaqay in uusan ka bixin heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. Wuxuu sheegay in ay khalad noqon doonto in la isaga baxo heshiiskaas "iyadoo
Ayatollah Cali Khamenei oo weerar afka ah ku qaaday madaxwayne Trump
Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran ayaa difaacay heshiiskii Niyukleerka ee Iiraan ay la gashay quwadaha waawayn. Ayatollah Cali Khamenei ayaa isticmaalay luuqad adag isaga oo Trump ku
Kismaayo oo degan xili la helay xog ku saabsan weerarkii huteelka
KISMAAYO, Jubbaland – Kadib weerarkii ay Al-Shabaab gabal-dhicii Jimcaha ku beegsatay huteelka Cascasey, halkaasi oo ay ku naf-waayeen 26 ruux ayaa Axada maanta ah waxaa degan xaalada xarunta gobolka Jubadda Hoose. Meydadka dadkii lagu laayay dhacdadaasi oo ay ku jiraan shaqsiyaad caan ah sida wariyeyaal, ganacsato
BRUSSELS, Belgium – Warbixin ay Hay’addaha Xasaradaha Caalamiga ah kasoo saartey wada xaajoodyada dowlada federaalka iyo maamulkaasi ayaa ciwaan looga dhigay "Khataraha dib-u-dhigista wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland". Qormadda International Crisis Group oo u muuqata mid isku dheela tiran ayaa diiradda saartey dhibaatooyin "ka dhalan karaan" hadii
KISMAAYO, Jubbaland – Inkasta oo uusan waqti cayimin, madaxweyne Axmed Madoobe ayaa shaaciyey "in ay sida ugu dhaqsiyaha badan" ku fahfaahin doonan "cidda ku lugta lahayd" weerarkii huteelka Cas-casey. Inta la xaqiijiyey 26 ruux oo ay ku jiraan ajaaniib iyo
Madaxweyne iyo hogaamiye mucaarad: ''Tareen ayay ku kulmeen xal masiiri ahna ku gaareen''
Madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo iyo hogaamiyaha mucaaradka Prabowo Subianto ayaa markii ugu horreysay tareen gudihiis ku kulamay tan iyo markii ay ku tartameen doorasho muran bada dhalisay taasi oo dibedbaxyo sababtay. Mr Widodo ayaa bishii April dib loo doortay balse Prabowo Subianto ayaa ku eedeeyay in uu doorashada ku shubtay taas oo
Qarax is-miidaamin oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb
DHUUSAMAREEB, Galmudug – Ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay, laba kelana way ku dhaawacmeen markii qarax is-miidaamin uu Axada maanta ah ka dhacay magaaladda Dhuusamareeb, caasimada Galmudug.
Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Dhuusamareeb
Qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa isku qarxiyay bartamaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud halkaas oo uu ku dhaawacay shan qof sida ay sheegeen dad
Xildhibaan ku dhaawacmey qaraxyo ka dhacay Dhuusamareeb
DHUUSAMAREEB, Galmudug – Macluumaad dheeri ah ayaa laga helayaa qaraxyo Axadda maanta ah ka dhacay bartamaha Dhuusamareeb, caasimadda Galmudug. Qaraxa koowaad oo is-miidaamin ahaa ayaa laga soo wariyey maqaayad Shaaxa laga cabo oo ku taala
Mareykanka oo raaf ka biloowday
Saraakiisha socdaalka ee Maraykanka ayaa qorsheynaya in dalkaasi ay maanta ka fuliyaan hawlgallo ka dhan ah dadka soogalootiga ah ee sida sharci darrada ah kusoo galay wadankaasi. Madaxweyne Trump ayaa xoogga saaray wax ka qabashada muhaajiriinta sharci darrada ku gala wadankiisa, balse dadka soogalootiga ah ee Maraykanka uga soo
Golaha Amniga Jubbaland oo go'aano soo saarey kadib qaraxii Cascasey
KISMAAYO, Jubbaland - Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam ayaa shir gudoomiyay kulanka golaha amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland. Xaalada guud ee amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa ugu horayn kulanka lagaga
Dhuusamareebo: Qarax Dilay Hal Askari 5 Kalena Dhaawacay
Wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in saaka halkaasi uu ka dhacay qarax uu ku dhintay hal qof, shan kalana ay ku dhaawacmeen, xilli Ra&apos;iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu magaaladaas ku sugan yahay. ...